ယူနိုကျတကျနဲ့ ပွိုငျရတာမို့ အာရုံစိုကျရမှာ မဟုတျပဲ လီဗာပူးအတှကျမို့ကို အာရုံစိုကျရမယျဆိုတဲ့ ပှဲကွိုစကား - Myan News
ဒီကနေ့ ယှဉျပွိုငျရမယျ့ ယူနိုကျတကျနဲ့ ပှဲအတှကျ လီဗာပူးအသငျးခေါငျးဆောငျ ဟနျဒါဆနျက ပှဲကွို ပရိုဂရမျမှာ အသငျးရဲ့ သဘောထားကို ကိုယျစားပွုတဲ့ စကားတှကေို ပွောဆိုခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။
ဟနျဒါဆနျက “ လီဗာပူးနဲ့ ယူနိုကျတကျပှဲဟာ မာဆေးဆိုဒျ ဒါဘီထကျ ပိုကွီးမားတဲ့ ပှဲတဈပှဲလား ဒါကို သခြောမပွောလိုပမေယျ့ ဒီပှဲက အရမျးကို အရေးကွီးတဲ့ ပှဲတဈပှဲဖွဈကာ ခွားနားတဲ့ ပှဲတဈပှဲဖွဈပါတယျ။
ပရျောဖကျရှငျနယျ တဈဦးအဖွဈ ကနြျောက ပွိုငျဘကျတိုငျးကို လေးစားမှုရှိရမယျလို့ သငျကွားခံခဲ့ရတယျ။ လီဗာပူး ကစားသမားတဈယောကျအဖွဈ ယူနိုကျတကျက ဘယျလို သနျမာတဲ့ အသငျးကောငျးတဈသငျးလညျးဆိုတာကို နားလညျဖို့နဲ့ ဒီပှဲကို လေးစားမှုရှိဖို့ လိုအပျတယျဆိုတာကို သိထားပါတယျ။
ကနျြောတို့နဲ့ ပကျသကျပွီး အခွားသော အသငျးတှကေ စံသကျမှတျခကျြတှေ လုပျကွတာမြိုးကို ကနြျော သဘောမကဘြူး။ ကနျြောတို့တှေ ကိုယျဘာသာ သကျမှတျခကျြ မရှိပမေယျ့ အခွားအသငျးတှကေ လုပျကွတာတှရှေိတယျ။ ကနြျောအတှကျကတော့ လီဗာပူးရဲ့ စံက လီဗာပူးပါပဲ။ အခွား ဘယျလို အဓိပ်ပာယျ သကျမှတျခကျြမှ မရှိပါဘူး။
လီဗာပူးအတှကျ အောငျမွငျမှုတှေ ရခငျြပါတယျ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ အောငျမွငျဖို့က အသငျးပရိသတျတှအေတှကျ အမြားကွီး အဓိပ်ပာယျ ရှိလို့ပါပဲ။ ကနျြောတို့ အောငျမွငျခငျြတာက ဒါကလှဲရငျ ဘာအကွောငျးမှ မရှိပါဘူး။ လီဗာပူးရဲ့ အဓိက သနျမာမှုက ကနျြောတို့ ကိုယျတိုငျရဲ့ အဆငျ့အတနျးနဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြပါ။ ဒါကလှဲရငျ အခွားသော လုံ့ဆျောမှုလညျး မလိုပါဘူး။ ကနျြောတို့အတှကျ နောကျပှဲကို အနိုငျရဖို့ မလိုပါဘူး။ တဈခုတညျးသော အခွအေနကေ လကျရှိ ပွိုငျရမယျ့ပှဲကို အာရုံစိုကျဖို့ဖွဈတယျ။
မနျနဂြောက အဝတျလဲခနျးမှာ စံခြိနျတှအေကွောငျး ပေးမပွောဘူး။ နောကျပှဲမှာ ဘယျအသငျးကို အနိုငျကစားရမယျဆိုတာလညျး ဘယျသူမှ စိတျမဝငျစားဘူး။ ဘာလိုလဲ? ကနျြောတို့က လကျရှိမှာ နနေပွေီး ကိုယျပွိုငျရမယျ့ပှဲကို ယှဉျပွိုငျဖို့ပဲ အရေးကွီးပါတယျ။ ပွီးမှ အခွားအရောတှေ လာပါလိမျ့မယျ။
ယူနိုကျတကျကို ပွိုငျရမှ ပွိုငျဘကျတှကေို လေးစားတာ မဟုတျပဲ အသငျးတိုငျးကို တူညီစှာ လေးစားပါတယျ။ ယူနိုကျတကျ ပွိုငျဘကျကောငျးပါ။ သူတို့အသငျးက ကစားသမားတှနေဲ့ လကျရှေးစငျမှာလညျး တှဲကစားဖူးပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာ အကောငျးဆုံး ရလဒျအတှကျ ကနျြောတို့တှေ အာရုံစိုကျမှုကို အပွညျ့အဝ မလုပျနိုငျဘူးဆိုရငျ ကနြျောတို့ အပွဈပေးခံရပါမယျ ” လို့ ဆိုခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီကနေ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် ယူနိုက်တက်နဲ့ ပွဲအတွက် လီဗာပူးအသင်းခေါင်းဆောင် ဟန်ဒါဆန်က ပွဲကြို ပရိုဂရမ်မှာ အသင်းရဲ့ သဘောထားကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ စကားတွေကို ပြောဆိုခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်ဒါဆန်က “ လီဗာပူးနဲ့ ယူနိုက်တက်ပွဲဟာ မာဆေးဆိုဒ် ဒါဘီထက် ပိုကြီးမားတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲလား ဒါကို သေချာမပြောလိုပေမယ့် ဒီပွဲက အရမ်းကို အရေးကြီးတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ကာ ခြားနားတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တစ်ဦးအဖြစ် ကျနော်က ပြိုင်ဘက်တိုင်းကို လေးစားမှုရှိရမယ်လို့ သင်ကြားခံခဲ့ရတယ်။ လီဗာပူး ကစားသမားတစ်ယောက်အဖြစ် ယူနိုက်တက်က ဘယ်လို သန်မာတဲ့ အသင်းကောင်းတစ်သင်းလည်းဆိုတာကို နားလည်ဖို့နဲ့ ဒီပွဲကို လေးစားမှုရှိဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို သိထားပါတယ်။
ကျနေ်ာတို့နဲ့ ပက်သက်ပြီး အခြားသော အသင်းတွေက စံသက်မှတ်ချက်တွေ လုပ်ကြတာမျိုးကို ကျနော် သဘောမကျဘူး။ ကျနေ်ာတို့တွေ ကိုယ်ဘာသာ သက်မှတ်ချက် မရှိပေမယ့် အခြားအသင်းတွေက လုပ်ကြတာတွေရှိတယ်။ ကျနော်အတွက်ကတော့ လီဗာပူးရဲ့ စံက လီဗာပူးပါပဲ။ အခြား ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ် သက်မှတ်ချက်မှ မရှိပါဘူး။
လီဗာပူးအတွက် အောင်မြင်မှုတွေ ရချင်ပါတယ် ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အောင်မြင်ဖို့က အသင်းပရိသတ်တွေအတွက် အများကြီး အဓိပ္ပာယ် ရှိလို့ပါပဲ။ ကျနေ်ာတို့ အောင်မြင်ချင်တာက ဒါကလွဲရင် ဘာအကြောင်းမှ မရှိပါဘူး။ လီဗာပူးရဲ့ အဓိက သန်မာမှုက ကျနေ်ာတို့ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အဆင့်အတန်းနဲ့ မျှော်လင့်ချက်ပါ။ ဒါကလွဲရင် အခြားသော လုံ့ဆော်မှုလည်း မလိုပါဘူး။ ကျနေ်ာတို့အတွက် နောက်ပွဲကို အနိုင်ရဖို့ မလိုပါဘူး။ တစ်ခုတည်းသော အခြေအနေက လက်ရှိ ပြိုင်ရမယ့်ပွဲကို အာရုံစိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်။
မန်နေဂျာက အဝတ်လဲခန်းမှာ စံချိန်တွေအကြောင်း ပေးမပြောဘူး။ နောက်ပွဲမှာ ဘယ်အသင်းကို အနိုင်ကစားရမယ်ဆိုတာလည်း ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားဘူး။ ဘာလိုလဲ? ကျနေ်ာတို့က လက်ရှိမှာ နေနေပြီး ကိုယ်ပြိုင်ရမယ့်ပွဲကို ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ပြီးမှ အခြားအရောတွေ လာပါလိမ့်မယ်။
ယူနိုက်တက်ကို ပြိုင်ရမှ ပြိုင်ဘက်တွေကို လေးစားတာ မဟုတ်ပဲ အသင်းတိုင်းကို တူညီစွာ လေးစားပါတယ်။ ယူနိုက်တက် ပြိုင်ဘက်ကောင်းပါ။ သူတို့အသင်းက ကစားသမားတွေနဲ့ လက်ရွေးစင်မှာလည်း တွဲကစားဖူးပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာ အကောင်းဆုံး ရလဒ်အတွက် ကျနေ်ာတို့တွေ အာရုံစိုက်မှုကို အပြည့်အဝ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့ အပြစ်ပေးခံရပါမယ် ” လို့ ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။